Xuska Maalinta Xasuuqa Ubbo Ugaysatay Shacabka Deegaanka - Cakaara News
Xuska Maalinta Xasuuqa Ubbo Ugaysatay Shacabka Deegaanka
Jigjiga(CN) Axad, 15ka Nov 2015, Waxaa saaka guriga shirarka ee sayid maxamed cabdille xasan kadhacay xuska munaasabada 4,aad ee xasuuqii Ubbo ugaysatay shacabka deegaanka oo sanad walba laxuso 5ta bisha 3,aad ee Hidhaar.
Xuska maalintan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta xukuumadxa DDSI, shaqaalaha xafiisyada kaladuwan ee heer deegaan, odoyaasha, ardayga hoyga agoonta ee waalidiintood ubbo laysay, waalidiin iyo dhalinyaro kaladuwan oo ubbo waxyeelaysay iyo qaybaha kaladuwan ee bulshada.
Hadaba munaasabadan oo ah mid si balaadhan sanad walba xiligan oo kalelooga xuso dhamaan deegaanka ayaa lagu xasuustaa xasuuqyadii kaladuwanaa ee ay ubbo ugaysatay bulshada deegaanka oo ahaa kuwo kusalaysnaa dil, dhac, boob, kufsi, gawrac, dooxid oo ay maalin kasta ugaysan jireen shacabka deegaanka goob kasta oo uu kusugan yahay ayaa waxaa ugu horayn soo istaagay masraxa ubbadkii ay ubbodu agoomaysay ee ay waalidiintood si ulakac ah oo damiir la’aan ah ulaayeen, xoolahoodiina udhaceen iyadoo xukuumada DDSI ay kadhiidhiday waxyeelada ubbo ugaysatay guud ahaan shacab waynaha deegaanka gaar ahaana dhalintan da’da yar kadibna usamaysay dugsi hoy ah oo waxbarasho tayo sare leh, cunto, macalimiin, jiif, caafimaad, dhar iyo adeegyo kalaba siiya si aysan utabin waalidiintood. Dhalintan ayaana goobta kacadeeyay iyagoo qiiraysan oo waliba ilmaynaya in waalidiintood ubbo si axmuqnimo ah oo biniaadamnimada kabaxsan ulaysay iyagoo ilmadoodu ka oohisay dhamaan dadkii kusugnaa hoolka. Kadibna mahadnaq wayn usoo jeediyay XDSHSI ee haatan majaraha uhaya xukuumada DDSI gaar ahaana madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, golaha kabineega, ciidanka halyeyada gaarka ah ee DDSI oo dulmigii ubbo kuhaysay shacabka kadulqaaday.
Sidoo kale, waalidiin iyo dhalinyaro kaladuwan oo ay ubbo waxyeelaysay ayaa munaasabada kahadlay iyagoo xaqiijinaya waxyeelada ubbo ugaysatay. Waxaana kamid ahaa: dhalinyaro aan iyagoon waxba galabsan ay bambo kutuureen oo labada indhoodba beelay, qaar ay xubnihii taranka ee raganimada xabad kaga fureen oo aan maanta reerkiisa dhaqan Karin, qaar ay gacmaha kajajabiyeen, qaar ay lugo tireen, qaar ay dhagaha jarjareen iyo hooyooyin ay caruurtoodii agoomeeyeen. Dhamaan xubnahan ayaana cadeeyay dhibaatooyinka ubbo ugaysatay. Waxayna hamabalyeeyeen xukuumada DDSI waxqabadkii iyo gurmadkii ay usamaysay gaar ahaana ciidanka gaarka ah ee DDSI. Waxayna tilmaameen in mashruucii ubbo lasoo afmeeray iyo in dhawrka gabashada kujira ay iska yimaadeen maadaama aysan maanta cidna waxyeeli Karin.
Ugudanbayna, waxaa munaasabad kahadlay madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga marwo Sucaad Axmed Faarax oo ugu horayn si tiiraanyo loeeh ugu tacsiyaysay dhamaan shacabka deegaanka gaar ahaana eheladii yo qaraabadii ay dadkoodii ubbo laysay iyadoo sheegtay in dhibaatada ubbo ugaysatay shacabwaynaha deegaanka ay tahay mid aan la iloobi doonin. balse ubbo haatan lasoo afjaray. Shaqsi danbana aysan waxyeelayn doonin oo ciidanka gaarka ah ee xukuumada DDSI oo kaashanaya ciidanka difaaca qaranka ee dalkeena itoobiya iyo shacabkuba ay meel saareen ubbo iyo Al-qushaashba. Waxayna kubooriday in shacabka iyo xukuumada oo iskaashanaya ay udiyaargaroobaan fulinta qorshaha koboca iyo isbadalka dhaqaalaha ee wareega 2,aad si aan uga baxno saboolnimada oo ah cadawgeena 1,aad ee maanta jirta.